Vaovao - Fampirantiana valizy Wenzhou Golden Eagle Golden / Fampiratiana valiha pompana iraisam-pirenena / Hihaona aminao ao Oubei yongjia ny 23 Oktobra
Ny fampiratiana valizy Wenzhou (Golden Eagle) faha-15 Fampirantiana / fampirantiana valva / fampiroboroboana valizy / Fananganana valizy paompy iraisam-pirenena / orinasa mpamokatra / mpamokatra vokatra valizy / dia hatao ao amin'ny Wenzhou Yongjia Oubei Culture and Sports Square manomboka amin'ny 23-25 ​​oktobra 2020!
Ny fampiroboroboana valizy paompy Wenzhou (Golden Eagle) faha-15 dia nohavaozina amin'ny lafiny ambaratonga, kalitao ary serivisy derivatif, miaraka amin'ireo trano heva 650 sy tombana fampirantiana 20 000 metatra toradroa. Manohiza manatanjaka ny mpihaino arak'asa an-trano ary mandrindra ny fanasana ny alemana, Italia, Korea, Singapore, India, Vietnam ary ireo mpividy vahiny hafa, ary ny fikambanan'ny orinasa farany mpampiasa dia asaina hiseho amin'ny valizy paompy, fantsom-pipa, toy ny teknolojia farany sy vokatra, saha ho an'ny indostrian'ny valizy paompy hanome vokatra kalitao, teknolojia farany ary vahaolana.
Fampiroboroboana valizy paompy 15th WPEPHENE (Golden Eagle) dia fampiratiana valizy paompy matihanina eto an-toerana, nanjary hetsika matihanina tsy azon'ny matihanina atao eto an-toerana sy any ivelany.
Hatramin'ny wenzhou Jinying Media Co., LTD. Natao fampirantiana valizy paompy matihanina tamin'ny taona 2004, nihanitatra ny fiantraikany ary nivelatra koa ny refy, ary nanjary iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra teo amin'ny sehatry ny indostria izy io. Ny fampirantiana dia mampiseho amin'ny ankapobeny ny tanjaky ny indostrian'ny paompy sy ny valizy ao Shina, indrindra ny “tanànan'ny pump sy valve China” Manatsara kokoa ny fahitana sy ny fitaoman'ny indostrian'ny paompy sy valizy Wenzhou ao an-trano sy any ivelany; Mampahafantatra talenta mandroso, haitao, fitantanana ary vola hanatsarana sy hanovana indostria nentim-paharazana, hampiroborobo ny fanatsarana sy fanavaozana ny firafitry ny indostria ary hanatsara kokoa ny fifaninan'ny orinasa; Mampitombo ny varotra varotra varotra wenzhou paompy varotra varotra vahiny, mampitombo ny vola miditra amin'ny fifanakalozam-bola vahiny; Izy io dia manan-danja lehibe ara-tantara sy azo ampiharina mba hampiroboroboana hatrany ny fampandrosoana mitohy, haingana sy mahasalama an'i Yongjia, Wenzhou ary na ny indostrian'ny paompy sy valizy China aza.
Taorian'ny taona maro fampandrosoana, Wenzhou paompy sy ny valizy indostrialy izao dia manana orinasa maherin'ny 3,110, ao anatin'izany ny orinasa 523 miaraka amin'ny sandan'ny vokatra isan-taona mihoatra ny 20 tapitrisa yuan. Misy orinasam-teknolojia avo 77 misy karazany maro. Ny faritra fanangonana indostrialy dia any Oubei, Longwan ary Ruian indrindra. Tamin'ny taona 2019, ny sandan'ny vokatra indostrian'ny indostria iray manontolo dia nahatratra 45 miliara yuan, miaraka amin'ny fitomboana 9% isan-taona.